5 Ajụjụ maka Beyonce — njem Lee - Official Site
N'iburu nke ahụ n'uche, ọ bụrụ na m nwere ohere izute ya, ndị a bụ ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị m nwere ike ịjụ, ụfọdụ n'ime ha na m na-arụ ọrụ site onwe m.
1. Olee mmetụta n'ahụ ndị i chere gị music bụ ná ndụ na ụkpụrụ nke na-eto eto?
2. Music bụ a mara mma ụdị onye okwu, ebe anyị na-enwe ohere na-awụkwasị anyị iwe, echiche, na agụụ mmekọahụ ya. Ma n'ihi na ọtụtụ nde mmadụ music na-ejekwa ozi dị ka soundtrack na-ndụ ha, na ọ na-akpụzi ha n'ụwa echiche. Olee otú i ghara imegide onwe okwu na ibu ọrụ i nwere dị ka ihe influencer?
3. Ì chere na ntị unu ise ka gị onwe gị mma na mmekọahụ (bụ nke na-adọpụ si gị art) nemegide ozi na songs dị ka, "Pretty-ewe Mmadụ Iwe?” Na na song, o yiri ka unu na-agba ume ụmụ agbọghọ ghara igbu onwe ha na-achọ izu okè, na-elekwasị anya na mkpụrụ obi ha kama ha ọnụ ọchị. Ma ì chere mgbe nile elu nke ọkọlọtọ anyị nke beauty- nke ị n'ụzọ doro anya meet- ọrụ megide na ozi?
4. Ọ dị ụzọ a na-eme ememe di mmekọahụ na-enweghị ihe n'ihu ọha a hụ na ihe ọ na-enwe ụdị mmekọahụ anwa ndị ọzọ na-abịa?
5. Gịnị mere na Jay-Z na ya forties ma ka na-ngwa nju oyi karịa m?
Ndị a bụ nanị ole na ole n'ime ajụjụ ahụ batara ya n'uche n'abalị ikpeazụ. Ị na ụmụ okorobịa nwere ihe ọ bụla echiche?
Eran Rafael • January 29, 2014 na 11:12 Abụ • zaghachi
Chris • January 29, 2014 na 11:13 Abụ • zaghachi
Ekele dị egwu n'ihi ịbụ eme iji na-adịghị etinye ihe agha. Ọtụtụ posts m na hụrụ si Kraịst ndidi otú ahụ iwe na hiere.
TransformNotConform • January 29, 2014 na 9:29 pm • zaghachi
Nke a bụ mma ịhụ. Kraịst na-adịghị nnọọ ileghara nsogbu ma ọ bụ nanị nile si agha ndị eti “Unu gara n'ala mo.” Dị nnọọ kpasue ha leruo ihe ọ bụ ha na-azọrọ na otú ha si eme omume. #CauseSomethingSureAintAddingUp Ekele dịrị Gị njem
Broc • January 29, 2014 na 11:14 Abụ • zaghachi
M ga-ajụ ya banyere ya na ebe imọ ndisịn idem na Illuminati. ma #5 ama m inyefe haha
Julia • January 29, 2014 na 11:15 Abụ • zaghachi
M n'anya otú ajụjụ gị dị n'ụdị. Ọ bụ nnọọ mmetụta n'ahụ ndị niile na ụmụ agbọghọ bụghị naanị na-eto eto na ọ bụ nnọọ nkà. Ma m ekweta, mgbe ụfọdụ ya talent e ekpuchi ya ịgba egwú ma ọ bụ enweghị uwe.
Andrew HaHa Ross • January 29, 2014 na 11:17 Abụ • zaghachi
M mmasị otú ị gosikwa ihe niile i kwuru na a na-ahụ n'anya ma bara uru n'ụzọ. Beyonce & ọzọ entertainers na-na zuru okè ọnọdụ na-ka nlereanya nke ndị ntorobịa anyị ma a ọtụtụ adịghịkwa eru ha zuru nwere. Anyị ga-ekpe ekpere maka ha. Olileanya na ihe niile dị mma nwoke. Nọgidenụ na-eme gị ihe ahụ maka Alaeze!
JasmineArogundade • January 29, 2014 na 11:19 Abụ • zaghachi
Echere m na nke ahụ bụ ụzọ magburu onwe ya okwu ajụjụ ndị ahụ. My version nke ha nwere ike ịbụ a wee bit iwe akpa ọchị. Daalụ maka ịbụ ihe nlereanya & na-arụ ọrụ kwa ụbọchị na-emeghe iche iche’ cheta na Christ / nkwenkwe
Debbi • January 29, 2014 na 11:22 Abụ • zaghachi
Daalụ maka nke a.
oge ochie • January 29, 2014 na 11:25 Abụ • zaghachi
akpa ọchị @ #5. ma ọ bụghị ihe, legit ajụjụ maka fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na onye ọ bụla na ọ bụ aspiring na music ụlọ ọrụ.
JonReagan • January 29, 2014 na 11:25 Abụ • zaghachi
M chere na ndị ahụ bụ ezi ihe na ma eleghị anya chere akpali iche ma na-echeta na ọ bụ ike nke Chineke rue nzoputa. Ọ ga-amasị maka dị ọcha Gospel na-wetaara ya ka Mmụọ Nsọ na-egosi ya na njehie nke ya ụzọ dị ka o nwere maka anyị niile. Ma ọ bụghị ya, Amaghị m ihe mere o ga-elekọta ịgbanwe. N'agbanyeghị, ị bụ ụzọ ngwa nju oyi karịa JayZ. Way ngwa nju oyi!
Olivia • January 29, 2014 na 11:56 Abụ • zaghachi
M nke abụọ, na- Way ngwa nju oyi! :-)
Tenyll • January 29, 2014 na 1:00 pm • zaghachi
Leila. Bailey • January 29, 2014 na 11:27 Abụ • zaghachi
Ndị a niile bụ oké ajụjụ!!!!!!
#5 ezie.. akpa ọchị
JesiliaRose • January 29, 2014 na 11:29 Abụ • zaghachi
A niile bụ ihe ajụjụ njem Lee. Eche na ọ bụ banyere oge anyị kwụsị ziri ezi ya music karịsịa Kraịst na-ege ya stof. Nke a bụ oké!
P.S. My chọrọ ịlụ si “nah, ị na-ngwa nju oyi karịa Jay-Z.” :) Chineke na-agọzi gị Bro.
Michelle • January 29, 2014 na 11:29 Abụ • zaghachi
M mgbe nile na hụrụ n'anya Beyonce. Ọ bụ ihe mara mma ma na nkà. M na-miri n'ime mmekọrịta mụ na Chineke. Ọ bụ ezie na m n'anya na nwaanyị a na, M na-adịghị ege ntị ya music ọzọ n'ihi na m nwere kpọmkwem otu ụdị mmetụta gị ajụjụ na-egosipụta. M na-atụ gị-ohere ịjụ ya ndị a n'ihi na m ga-achọ ịnụ ya na-aza, ma hụ otú o nyochasiri ndụ ya. M na ọ dịghị ikpe; Na m eche ihe na-aga ná ndụ ya. Daalụ maka nke a.
Frank Gil • January 29, 2014 na 11:31 Abụ • zaghachi
Ajụjụ ikpeazụ ezie na.
Great ndepụta. M ga-achọ ịnụ ya azịza #3. Awesome Njem!
Justin • January 29, 2014 na 11:34 Abụ • zaghachi
M hụrụ n'anya ajụjụ ndị a. Ị na-eme ihe dị egwu ọrụ articulating ezigbo ajụjụ na ọtụtụ n'ime anyị nwere ya na a nke ọma chere si, ma na-elekọta ụzọ. Ị bụ onye mmụọ nsọ m na ọtụtụ ndị ọzọ. Olileanya gị blog metụrụ onye (Amaara m na ọ ga-). Onye ma, ma eleghị anya, ọ ga-ejere Beyonce!
Zaeria • January 29, 2014 na 11:36 Abụ • zaghachi
Ga-amasị m mara, ihe ma ọ bụ ọ bụrụ na ihe ọ bụla ókè e onwe setịpụụrụ gị ibu ọrụ nke mmetụta taa ọgbọ. Ọ bụrụ otú ahụ, olee otú i aka ime ya? ọ bụrụ na ọ bụghị, ya mere? (nke ụdị Piggy Akwadoo on ajụjụ #2)
SusanBonnerDunston • January 29, 2014 na 11:40 Abụ • zaghachi
Ọma we Njem! M na ị bụ a ezi nwa okorobịa nke Chineke mgbe mbụ m nụrụ ị na North Carolina
Olivia • January 29, 2014 na 11:43 Abụ • zaghachi
Daalụ maka gị post. M na nso nso a wee gafee a video na-akọwa ọtụtụ ihe banyere ya, na “ya” -agwa ya ihe onwunwe (Sasha kpụ ọkụ) ahụ na otú o egwú na ogbo. Amalitere m ikiri ihe Grammy si na ụmụ m na mgbe ọ malitere na-ete egwú ndị rịọrọ m ka m gbanwee ojii. Mgbe m posted a info na saịtị ọzọ nanị na-ekwu na anyị kwesịrị ịkpachara anya ihe ụmụ anyị na-ele na ndị ha na-enwe mmasị, M ruffled a otutu feathers. M Ji afụ ụfụ site na ụzọ aghụghọ onye iro na-eji ndị mmadụ, ebe na ihe ruo mgbe m mgbe ụfọdụ na-abịa anya aka ike. Achọghị m ka na m amụta ka. Nke a bụ nnọọ nke ọma na-etinye nwa-nne-.
Timothy Brown • January 29, 2014 na 11:43 Abụ • zaghachi
I kwuru na ị bụ onye Kraịst n'ọtụtụ oge, Ì chere na ndị music ị na-emepụta bụ a yiri nke Kraịst, na ị.
Rhionah • January 31, 2014 na 5:08 Abụ • zaghachi
Ana m gi na onye a girl.
Tiheasha • January 29, 2014 na 11:43 Abụ • zaghachi
Amen, -ekele unu maka nke a! Ana m ịlụ kpagburu m “ezinụlọ” nke pụtara ndị nwanyị na ụmụnna ha n'ime Kraịst… n'ihi ese otu ajụjụ na nchegbu m na-adịbeghị anya isiokwu na Beyonce. Otú ọ dị m ekpe ekpere naanị nye Chineke otuto n'agbanyeghị ihe.
Cindy • January 29, 2014 na 11:48 Abụ • zaghachi
Ọma kwuru ma ọ jụrụ, mma ma.
Ruthie • January 29, 2014 na 11:49 Abụ • zaghachi
Hụrụ n'anya na-esiri ajụjụ. Ahụwo m ma unu ma Jay-Z, na m agbagha. Anọgide na-abụ ihe nlereanya. -Adịghị anya azụ! Na-elenụ anya Up! Ka ndụ gị Toonụ Chineke! Ị na Cross Movement enyemaka bulie m ụmụaka. M ga-ruo mgbe ebighị ebi na-enwe ekele.
Allen • January 29, 2014 na 11:49 Abụ • zaghachi
M na-ekweta na a ga-aza ajụjụ site Beyonce onwe ya otu ụbọchị. M n'anya otú ha dị n'ụdị na ịdị omimi nke na-na obi ndị na-ebumnobi na “Gịnị mere”
Alexis • January 29, 2014 na 11:52 Abụ • zaghachi
Beyonce nwere ike ma ọ na-abịa gafee a post, ajụjụ ndị a, ma ọ bụ gị n'oge ndụ gị. M ukwuu inwe obi abụọ ọ ga-aza ajụjụ ndị a ma ọ bụ na-eche na. Eziokwu ahụ bụ na ajụjụ dị mkpa ka a jụrụ nwere ike ịbụ na ụfọdụ na-agba ama nke atuaha na ọ nwere ike ma ọ na-eche dị agwa okwu.
O nwere ike dị nnọọ ga-atụle elu art, ma m na-eche ya abịa na a ọrụ dị ukwuu. A onye nke ya aha emeela ya ọrụ ndị a na-emegiderịta, na ha anọgide na-propel ya. Echere m na e nwere olileanya na ajụjụ, na ọ pụrụ ikpebi na-eche banyere ha. Olileanya ọ ga na-N a ọnọdụ ụfọdụ ebe ná ndụ ya na-agụkwa ha. Obi dị m ụtọ na ha na-jụrụ.
Nicky • January 29, 2014 na 11:55 Abụ • zaghachi
Na-amasị m gị ajụjụ. Ha na-agaghị na-eyi egwu ma chere na akpali iche. M na-aghọta na ịbụ onye na-eme egwuregwu bụ ike na nke na ha nwere ndụ ha na mpụga nke Chakwasa ihie. M na-eche na ha na-aghọta na n'ihi ọdịdị ha dị na ha bụ mgbe niile ke Chakwasa ihie. Ọtụtụ artist ziri ezi ọrụ ha site n'ikwu na ọ bụ “dị nnọọ ntụrụndụ.” M ga-achọ ịmata ya ebe-eme “ọ bụ nanị ntụrụndụ” ọgwụgwụ? Ọzọkwa, na site n'ịbụ onye na-achọ ịdị ka ọ ghọta na ya bụ ajụjụ maka ihe ndị e mebiri na ya music eme(ọ ifịk ifịk nabatara na ọnọdụ site na ịga na ụlọ akwụkwọ, na-akọrọ ụmụ)?
OfficiallySmilez • January 29, 2014 na 12:07 pm • zaghachi
N'ajụjụ ndị a na nchikota nke alot of kwere ekwe echiche; ndị kwere ekwe bụ ndị nọgidere na-abụghị nkwuwa okwu nke questionables nke ndị na-anụ aha. Echere m na kwa mgbe, anyị na-adị ngwa ịdọrọ uche gaa ihe ọjọọ nke ndị ọzọ artists ma ọ bụ ndị mmadụ n'ozuzu nke ayi mara na ọ bụghị naanị na-abịa dị ka ikpe ma ịkatọ… N'ihi na ndị na-anyị???. Ma ajụjụ ndị a na-eme dị iche. Ọ bụrụ na Beyonce na-aza ajụjụ ndị a, ọ, onwe ya, ga m kweere na o doro anya na, malite ịhụ na ihe anyị niile, tinyere hụrụ; nanị site n'ịza ajụjụ.
Awesome na kemmeochi (ajụjụ banyere J.Z) :)
Kym • January 29, 2014 na 12:15 pm • zaghachi
ekwetaghị m. Ị na-ngwa nju oyi karịa Jay Z …ị na-ezi ma na-akpali ụmụ okorobịa ndị na-ege ntị gị music ga-mma…ibi ndụ dị mma…n'anya Jesus….ịhụ ezinụlọ ha n'anya ma na-eto na-ikom nke ọkọlọtọ…ugbu a WTF jụụ. Beyonce bụ mara mma na nwere talent Otú ọ dị ya song nke na-aga….”M nwere ike-eto eto ma im njikere”….-agba ume ka ụmụ agbọghọ na-enye n'ime agụụ ihe ọjọọ na-enwe mmekọahụ na-abụghị ma ọ bụ alụmdi na nwunye… m 13 nwa nwanne e abụ abụ it..smh. Gịnị mere gbaa mmehie?
Chim Clera • January 29, 2014 na 12:17 pm • zaghachi
Chaị, nke a bụ egwu m na-atụ gị ga-esi na ohere njem artists mkpa artists dị ka gị mee ka ha na ntụziaka ezie na m na-ewere ya ma ọ bụrụ na ndị niile ajụjụ n'ezie jụrụ na ọ ga-enwe obi ụtọ ma na-agood chere niile ajụjụ ndị kwesịrị ekwesị nile nka si n'ebe yiri Beyonce.
Michael III • January 29, 2014 na 12:19 pm • zaghachi
M hụrụ n'anya nke a njem. #5 ama m inyefe. Ma ndị a bụ oké echiche nkpasu-iwe ajụjụ. Na omenka ma ego na Bible, ọ rịọrọ themseleves oge ọ bụla ha na-etinye gụchara metụrụ on a track.
Ma eleghị anya, ọ ga-ahụ nke a ma zaa ha n'ihi na ị :)
Johnnie K • January 29, 2014 na 12:28 pm • zaghachi
njem – Awesome ajụjụ, na n'ụzọ zuru okè gosikwa, Bro! M fọrọ nke nta na-ebili ma na-ahapụ m ndụ ụlọ dị ka Natalie Grant mere ná show. M na-ele show naanị n'ihi na m 13 afọ nwa chọrọ, na m chọrọ ịhụ ihe na-aga ọrụ n'ụwa nke music, dị ka m na-ekiri ya n'ihi na ọtụtụ akụkụ 10 afọ ndị gara aga. Ha dị 2 arụmọrụ na ọ na ekwu, “Oh, nke ahụ bụ m jam!” – Robin Thicke wee Pharrell. M nwere ịjụ nwa m ma ọ bụrụ na ọ maara ihe ndị na songs bụ ọbụna banyere, o kwuru na ya maara ma agaghị m agwa m (mmekọahụ na objectifying inyom.) Ya mere, e nwere tụgharịa akụkụ nke nne songs. Beyonce na ụfọdụ ndị inyom na artists’ songs iduga ndị inyom na-ekwupụta ha mmekọahụ mgbe ahụ objectified. Ọ bụ a egwu okirikiri nke mmehie nke na-eduga ọtụtụ ụmụaka na ndị nne na nna na-adịghị eche banyere onye ọ bụla ọzọ, n'ihi na mmekọrịta ha bụ otu dabeere na agụụ ihe ọjọọ… agbanyeghị, M na-ekwusa ezu, ezi ọrụ, unu n'anya music! – J
Alexis • January 29, 2014 na 12:32 pm • zaghachi
chere ezie na… otú n'obi na ị dị nnọọ ọkọ #5 a na ndepụta! akpa ọchị
Michael • January 29, 2014 na 12:36 pm • zaghachi
M ga-achọ ịjụ ya ihe mere na o kpebiri ịbụ a na-agụ egwú na-eme ụwa music. Amaara m na o nwere a Christian ndabere, ma nke ahụ adịghị eme ka m obi ụtọ. ọ, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ, na-na ọnọdụ na-uku ọrụ-ụdị ma ọ họọrọ dị nnọọ na-ewu ewu kama. M asị ọkọlọtọ anyị taa dị ka ndị America, karịsịa maka ndị ntorobịa.
On a Mkpa ọkụ dee, unu n'anya music. Ị chọrọ ime ọzọ song with Jimmy Nedum…..ma ọ bụ ihe ọ bụla aha ya bụ. akpa ọchị! Good ajụjụ n'agbanyeghị ịbụ.
Nicole • January 29, 2014 na 12:47 pm • zaghachi
N'ihi ya, m dị nnọọ nwere ikwu m na-agụ nke a m uru Njem Lee olu….Ko, ndị a bụ ụfọdụ egwu ajụjụ! Ọ ga-amasị m ịhụ nke a N'ajụjụ ọnụ!!
Chukwu gozie gị!!
Juanb • January 29, 2014 na 1:26 pm • zaghachi
njem Lee! Amaara m na eleghị anya ị na a ton nke ndị hollering na ya ma M nnọọ na-ekwu na ndụ gị na music ndidi a nnukwu agbamume na ngọzi m ije na Jizọs. Na gị ụka, M ụtọ ajụjụ niile. #4 rapaara m. (na ndị a bụ nanị m echiche m na-aghọta na m nwere a obere olu) M kwere na e nwere ụzọ ga-eme Ememe nwunye. Na dị ka onye na-eso ụzọ Jizọs, nchegbu m ga-ahụ ndị kwere ekwe ga-eji aka ha mmekọahụ. O siiri m aka ịhụ na obi nke Jesus’ na onye music / ndụ mgbe ihe ka ọtụtụ n'ihe ị na-ahụ na ha flaunting ha mmekọahụ. E nweghị ịhụnanya na na. Dị nnọọ ohere maka ọnwụnwa. One kwesịrị ịtụle otú ọ asọpụrụ Jehova ma na ibe ha na ụmụnna sisters.But mgbe ahụ, ọzọ, ụdị ịhụnanya a site echiche na-abịa site a Christian n'ọnọdụ.
Joana • January 29, 2014 na 1:37 pm • zaghachi
Yess, M hụrụ n'anya ajụjụ #3!!! Ya kpọmkwem ihe m na-eche oke!
Keisha • January 29, 2014 na 1:45 pm • zaghachi
ọma we….Enwere m 1 nwa na 3 ụmụ agbọghọ na m Sọl wee obi ụtọ na m zụrụ ha anya na onye na-ese site mkpụrụ nke ọrụ ha. Ọ bụrụ na ihe ha na-ike ike n'ahịrị na okwu Chineke. Ị chọrọ na udia mmụọ gị? Echere m na ị bụ n'ụzọ ngwa nju oyi karịa Jay-z.
Nikki • January 29, 2014 na 2:08 pm • zaghachi
Ị bụ UZ ngwa nju oyi karịa Jay-Z! Akpali na ị posted a taa. M wee gafee B si video, “Kasị Mma Ahụtụbeghị m ya,” n'abalị ikpeazụ on youtube mgbe aga site na ụfọdụ 80 songs. (??!!) Ọ malitere na ya na-acha ọcha lingerie, ma ọ bụrụ na m nwere ike ọbụna na-akpọ ya na. My obi na-afụ ụfụ dị ka m na-ele ya! Ọ bụ na-egbu mgbu na-ahụ ya & ọtụtụ ndị ọzọ mara mma & ịtụnanya artists ere onwe ha na mmekọahụ & flaunt ha mmekọahụ. Otú ọ dị, M ga-anatarịrị, Olee ebe ndị ikom ná ndụ ha? Olee ebe nna-ha & di? -Ekwesịghị B nna NA Jay-Z na- “ọgụ” n'ihi na ya na ihe nile ha nwere? Ha ekwesịghị inwe echebe ụmụ ya & asọpụrụ ya na ihe niile dị n'ime ha? Aga m na-akpa na-ekwu na ndị inyom kwesịrị ịkwụsị flaunting onwe ha, ma m ga-aka ndị mmadụ na-kwụpụ elu na efere & -amalite asọpụrụ ndị inyom. Ka anyị ike a ọha mmadụ ebe ndị inyom na-eme ememe & okpono ha Ezigbo Mma & ebe ikom na-akwanyere ùgwù. M ga-esi apụ m ncha igbe now. :)
Pamela • January 29, 2014 na 2:18 pm • zaghachi
ọma we…M na-ajụ onwe m ajụjụ ndị ahụ ha na-etinyekwa ihe nile anyị ma ị bụ na-akụ egwú ma ọ bụ, dị nnọọ ibi ndụ gị na mmadụ na-mgbe na-ekiri na onye a na-ekwu na m chọrọ ịdị ka ha mgbe m tolitere. Wee jide n'aka na ọ bụrụ na ị na-akpọ onwe gị Christ ka, ị na-eme ihe ndị na-anọchite anya Kraịst, WTF mere m ji kwere ụfọdụ ọtụtụ eto eto na-enwe mgbagwoju anya, onye ga-ha na-agbaso. M na-atụ ya Jesus Christ nanị Ya, ma ọ bụghị na anyị ga-anọgide na-eduzi ha ka ha n'olulu. Anyị niile bụ ajụjụ maka omume anyị, n'ihi na omume ka okwu ọnụ ike. Kasị egwú onye malitere na chọọchị na-aga n'ụwa n'ihi na anyị adịghị akwado ibe anyị Christian music. – Ndị ga-achọ ịnụ ya Ibọrọ ma ihe ga n'anya n'ihi ya ka ha laghachikwute Jesus.
Virgil • January 29, 2014 na 2:20 pm • zaghachi
Jay -Z abụghị enweghị ebe nso ngwa nju oyi mgbe ahụ Njem Lee!
Chelbia • January 29, 2014 na 2:46 pm • zaghachi
Olileanya otu ụbọchị, o ga-eji ya talent nke Chineke nyere ya na akpa ebe….ka ito na ekele naanị Ya. Ọ na-mechara ihe ijere Chineke ozi na-eji maka Alaeze Ya. Ekwensu zuru ya. Ka Chineke na-gracefull ya.
Trinity • January 29, 2014 na 2:47 pm • zaghachi
Mbụ niile m hụrụ n'anya olu gị Njem!!! Yeah olu gị akpa ọchị na ị haha! Banyere ajụjụ m n'anya ajụjụ 4 na 5 bụ hilarious, ọ dịghị Njem ị jụọ oyi n'ụwa.. Echere m na ị jụrụ nnọọ ịhụnanya na amara na amamihe.. Ezigbo ọrụ.. Na ike Jesus enyere bụghị naanị Beyonce ma ọtụtụ n'ime anyị ka ndị kwere ekwe.. M na-adịghị ege ntị ya music ọzọ n'agbanyeghị ịbụ..
Tony • January 29, 2014 na 3:54 pm • zaghachi
Ihe mbụ ihe a na-akwọ ụgbọala ya? A onye na-aga ma na-ekwe ha bụrụ ndị ezi omume ma ọ bụ ajọ omume. Ọ dịghị mkpa ka sugar uwe ihe ọ bụla. E nwere ụzọ ndị yiri nke ziri ezi n'iru madu ma na ọgwụgwụ ya bụ ọnwụ. Ee, anyị bụ ndị mmehie, mkpa maka Onyenzọpụta, ma ogologo oge ole ka anyị na-anọgide ya ịgwagbu ozi?? Bụ na ndị yiri ndị chọọchị nọ na Kọrịnt bụ ndị Pọl gbanwere? The eziokwu dị mkpa ka a kwuru.
Meredith • January 29, 2014 na 4:19 pm • zaghachi
Ajụjụ gị ikwughachi ndị m na chọrọ ịjụ ya dị ka nke ọma. Ga-amasị m ịnụ ya Ibọrọ ndị a nkwanye ùgwù eziokwu ajụjụ. M ga-atụkwasịkwa “Olee otú gị n'ezoghị lyrics-egosipụta na ị na onye ụkpụrụ?” na “Ọtụtụ n'ime gị ọhụrụ songs elu mmekọahụ, gị ahụ na gị mmekọahụ. Ị na-ewere ede a song na-eto Chineke nke na-agọzi gị na onyinye gị na-abụ abụ ma na-atụrụ ndụ?” na EE!..ị bụ maa ngwa nju oyi, a mma lyricist, na a ezi ihe nlereanya “The Good Life”! Nnọọ n'anya gị music!
Kruseaphix • January 29, 2014 na 4:25 pm • zaghachi
yo Njem! Ọma we / jụrụ na m na-eche ya zuru okè oge n'ihi ihe iseokwu nke artistes emetụta ndụ ndị ụmụaka na ndị ntorobịa, ọ dịtụbeghị mgbe ihe na mkpa nke na-ajụ ajụjụ. Days azụ, M nụrụ a comment si ebughibu agboro, bụ onye sịrị “ọ bụla eyen onye emee ihe banyere ihe ọ sịrị na ya song e welitere n'ụzọ kwesịrị ekwesị” na m ka whaaa?! O kwuru na ọ bụ naanị otu egwuregwu nakwa na ya ruo ụmụaka ihe ha na-amụta na m ka, “a nkụzi nwere ike dị ka mma ikwu,ya ọrụ m na-akụziri ma ụmụ akwụkwọ m na-ahụ maka ihe ha na-amụta?.” Ya nnọọ crazy fam. Hụrụ n'anya ajụjụ nile dị ka m nwere a rọrọ ntụpọ n'ihi na Bey na ogologo ịhụ ya zọpụta kwa. M ga-agwa okwu a na ọzọ m post otú y'all nwere ike ịlele ya na kruseaphix.wordpress.com
John Mansaray • January 29, 2014 na 4:36 pm • zaghachi
Nke a bụ ozi nwere; na-emeghere anyị gị na-eso ụzọ na-ukwuu na-agbapụ iche. -emekarị, isi na-ịnọgide na-enwe a ọkọlọtọ nke mpako na kara n'elu-eso ụzọ ha. Ma nke a post iyi miri emi na ọ na-agba anyị na okwukwe Ndị Kraịst bụ ihe niile banyere nnọgidesi. M ka ya bụrụ na m pụrụ enwe ike na-etinye m n'ezie mmetụta o nwere banyere nke a post na okwu, ma nke a’ Ka nso ka m nwere ike nweta. Daalụ.
Gteqnix • January 29, 2014 na 4:40 pm • zaghachi
yo njem, mma ajụjụ. N'ezie Don pụtara nothin ma ọ bụrụ na ọ Zara ma ọ bụ na-ekwu bụ u mere Ua mgbe. Dịworo bụ a fan of hers kwesịrị ịma iji tụọ ya n'aka ndị ya…anit trippin buh njem, ure ụzọ oke ọkụ na-jụụ Jay aint on Ua otu…
Vicky • January 29, 2014 na 5:40 pm • zaghachi
“Jehova, ị ga-eme ka mkparịta ụka n'etiti Njem na B na-eme eme?”
Gary • January 29, 2014 na 6:05 pm • zaghachi
Ahụrụ m ya n'anya.. na ọnụ ọgụgụ 5 akpa ọchị
JOECLER • January 29, 2014 na 7:34 pm • zaghachi
miri na ezigbo ajụjụ njem.
Allison • January 29, 2014 na 7:34 pm • zaghachi
M na-eche ajụjụ ndị bụ nti i na-eche ugbu a, na ọ bụ onye nne na a ga-ụfọdụ ndị na-abụghị negotiables. O nwere nwa nwaanyị nke na-ele ya dị ka nke ọma dị ka nke anyị ma ọ bụrụ na anyị ekwe ka ha. M hụrụ ụfọdụ ebe na internet na ọ sịrị nwaanyị ahụ wee ma ama ịga chọọchị m .Ma ekele n'ezie maka ihe 1.1.Six na-apụghị Iru Records n'ihi na anyị ga-enwe ihe ọ bụla na-ege ntị to.God Gọzie y'all
John • January 29, 2014 na 8:34 pm • zaghachi
O kwesịrị Jesus. Ma n'ihi na ya ime na o nwere inye ndụ ya nye ya. Ukwuu na-enwe obi abụọ ma ọ ga-adị njikere inye ihe ya onwe ya otuto maka ya. Ma ọ bụrụ na o mere ha ha ihe mmetụta ọ pụrụ inwe n'ihi na ala-eze.
M na-etinyecha kpee ekpere ọ na-eme. Anyị niile kwesịrị.
Natalie • February 1, 2014 na 5:13 pm • zaghachi
JennB • January 29, 2014 na 8:51 pm • zaghachi
My onye nkọwa nke kọwara okwu “jụụ” adịghị ekwu banyere Jay Z…. #SorryNotSorry
MS Gee • January 29, 2014 na 9:00 pm • zaghachi
njem Lee, ọ bụ ezie na m chere na ajụjụ ndị ha ikwu na ìhè nke art ụdị music, ma eleghị anya, m dịtụ ike. adian ajụjụ, m na uche na-adịghị na ụgbọala n'ụlọ ọrụ ọ na-eme nke ịbụ onye Kraịst (ọ dịghị ihe ọzọ m na-eche na nke a bụ ya ọrụ dabere na ya affiliations na St. John UMC).
Enyere…Olee mmetụta n'ahụ ndị i chere gị music bụ ná ndụ na ụkpụrụ nke ụmụ agbọghọ na ndị inyom?
JSok • January 29, 2014 na 9:15 pm • zaghachi
Okwu ọma Njem. M na-ekele ọtụtụ n'ime ndị comments. Ọ na-agba ume ịhụ oké njọ Kraịst na-eche na-emekọ ihe ihe na-ewu ewu omenala-eweta ha. N'anya saịtị Bro, ekpe ekpere ka Chineke nọgide na-agọzi gị ozi.
mfe Cole • January 29, 2014 na 9:59 pm • zaghachi
m na-ekwu, ọ bụ ihe ọ bụ. Ị nwere ikike gị onwe gị na uche. Dị ka i kwuru,”ị ma ndị mmehie, ha chọkwara ka Chineke amara”. Ihe dị iche bụ, ị maara ihe Okwu ekwu na Beyonce adịghị. -Ekpe ekpere maka nke furu efu ichegharị ma hapụ si omume ọjọọ ha. Tripp, na-ahụ ezi ọrụ na-eruberenụ Jesus Christ
ABROWN • January 29, 2014 na 10:23 pm • zaghachi
Good ajụjụ! Ka m na-enye adịbeghị anya Grammy arụmọrụ, O wutere m, na wutere. Dị ka m chere banyere ya, M wee malite inwe mwute n'ihi na ya, n'ihi na m ghọtara ya adịghị kpuchie site di ya. Real ịhụnanya na-ekpuchi, ọ dịghị ka nwunye gị ọtọ-gụrụ ụwa.
efu • January 29, 2014 na 10:51 pm • zaghachi
M hụrụ n'anya ụzọ a e dere. Good ajụjụ mere na ịhụnanya, mere nke ọma nwanne ! #agba ha ume
Chepe • January 29, 2014 na 11:52 pm • zaghachi
The ajụjụ na-phenomenal M anya na ọ nụrụ banyere ya. Ha bụ ndị dị ùgwù na-eme ihe n'eziokwu ajụjụ ọtụtụ ndị na-enwe ya art nwere.
wụsa • January 30, 2014 na 12:21 Abụ • zaghachi
Ọma na-gị na ndị humblest onye m na-agụ banyere banyere Bey niile ọnwa ogologo. Daalụ maka mwube a oké atụ.
Chelbia • January 30, 2014 na 5:34 Abụ • zaghachi
Na m na ige ya ntị, bcz m hụrụ ya n'anya olu nke ukwuu! ma ugbu a,-ya nile music wee si ụlọ m bcz ọ na-agba ume omume mmekọahụ, mkpachapụ, na akparamàgwà nnupụisi. E nwere mmụọ ọjọọ na-arụ ọrụ trough ya ka influance nnọọ ụmụ agbọghọ site na mmalite. Ya mwute m mkpa iji chebe nwa m nwaanyị si 5 afọ si dị mma nke ukwuu na onyinye dị iche inyom bụ onye na kwesịrị a inyom nke Chineke ma ugbu a, na-eji maka alaeze nke ọchịchịrị. Ụfọdụ mgbe, m na-eche ma ọ bụ maara nke a ma ọ bụ na? Ma eleghị anya, na eleghị anya n'ime ya, ọ maara nke ọma na ọ pụghịzi ya… ma m na-eche na ọ bụ dị ka a prisoner..there nweghị ụzọ dị mfe maka ya… Naanị Jizọs offcourse! -Ahapụ ikpe ekpere maka ọrụ ebube! Ka Chineke amara ya!
Rachel • January 30, 2014 na 6:27 Abụ • zaghachi
M na-ekweta na Njem Lee, ma e wezụga…. Na ọ bụ ọtụtụ ngwa nju oyi karịa Jay-Z… nakwa n'echiche na ọ ga-na oyi na ndò nke Onye Pụrụ Ime karịa ọkụ hell ;)
ya herblessedseeds • January 30, 2014 na 9:10 Abụ • zaghachi
M na-ekele ọchịchọ na-amalite a mkparịta ụka na Ịhụnanya na-enwe olileanya inweta ụfọdụ nkwenye na ezi-okwu si a ozugbo onwe kpọsara Kraịst Beyonce. Nke a na mkparịta ụka ga na-aga , onwe anyị , Kraịst na onye ọ bụla . anyị na-enweghị ịmanye eziokwu , nanị akụ ya . Sylvia ọkụ herblessedseeds, on Facebook na Instagram
Vicki pizazzi • January 30, 2014 na 9:14 Abụ • zaghachi
M hụrụ n'anya Njem Lee.
PJ • January 30, 2014 na 9:59 Abụ • zaghachi
Chaị! Nke a bụ egwu! Ichoro, ma ka ka na nkwanye ùgwù. Amaara m na ọtụtụ n'ime anyị na-mgbagwoju anya dị ka ihe mere ndị Beyonce anyị Ndị Kraịst yiri ka mgbe niile ka nwere ngafe n'ihi na nke ya “okwukwe”.
Taniqua • January 30, 2014 na 11:53 Abụ • zaghachi
Gị ajụjụ mere ka m na-eche banyere otú m na-ele Beyonce. M na-ewere ya na ọ bụ nnọọ nkà. M na-akwanyere ya craft. M na-eche otú ọ ga-aza ajụjụ ndị ahụ. Ọ ga-abụ na-akpali. Great banyere ndị mara mma na-ewute song. Ọ na-agwa ụmụ agbọghọ ghara igbu onwe ha ga-ezu okè, ma ọ hụrụ ụwa ọkọlọtọ nke izu okè….. Hmmm na-eme ka onye na-eche.
Hụrụ ya n'anya!!
diggity • January 30, 2014 na 12:11 pm • zaghachi
m na-amasị gị questions.but ajụjụ 5 eburu na mgbe ị na-esi gafee 40 gi agaghi-ele anya jụụ ma ọ bụ ịbụ jụụ m .Ma Don na-eche WTF a ezi uche ọtụtụ ndị chere…o doro anya na
RichieBeadle • January 30, 2014 na 12:49 pm • zaghachi
Great ajụjụ, njem! Na m dị nnọọ nọ na-agụ nke a dị ka ụfọdụ njem-awụ ọsọ n'ugwu wee elu na m ekweisi playlist!
Ajụjụ gị egosi omimi, inwe ezi nchegbu na uche, na yiri ebe na-elekọta. Ma n'ihi gịnị ka nke a Mega-Superstar ọbụna na-agụ gị ajụjụ ezie na, ukwuu na-erughị aza ha? Ọfọn – si m n'ọnọdụ – ọ ga, n'ihi na ị na-agaghị na-arịọ ya ihe ọ bụla ị na-adịghị ajụ onwe gị!
Gịnị bụ ihe àmà? Ọfọn, M na-ege ntị ya ugbu a…”Ọ bụ oge iji nyochaa onwe onye, anyị kwesịrị inyocha onwe, ọ bụ oge iji nyochaa onwe onye, anyị kwesịrị inyocha onwe eleghị anya!”
Lelee ya Beyonce! Gị onwe gị kwa, Jay-z! (Ọ na-akpọ Self Examination) :-)
Cinth • January 30, 2014 na 5:28 pm • zaghachi
hey njem, gị ajụjụ ndị dị mfe, ma chere akpali iche. Ọ lends na-agụ echiche nke onwe analysis na kwa, a echiche nke ibu ọrụ ibi ndụ anyị kwesịrị + ozi ọma nke anyị natara ma nakwere adị kwa ụbọchị, ma ọ dịghị mgbe nke a ebe mpako, ma mgbe nile na ịdị umeala n'obi na ịhụnanya. n'anya. n'anya. n'anya. ezi ịhụnanya siri ike karịa ili. i Na-maara ihe mere ma ọ bụ ihe na-eme ka ụtọ Beyonce-eme ihe ọ na-eme. ma anyị na-akpọ ya n'anya ma kpasuo n'anya, na-eje ozi. na i na-eche ajụ ha ajụjụ na ahụ gbasara ndị ndị dị anyị n'obi dị mma maka obi. na ezi akpasu ;)
ekele gị na-ahụ n'anya
p.s Jay z dị jụụ maka ụlọ akwụkwọ nwoke
Bethany • January 30, 2014 na 6:02 pm • zaghachi
Enwere m na-ekwu,ezigbo ọrụ na isiokwu a. M nnọọ eji na-anụ ihe kụọ ya,ma na-anụ i nwee ezigbo arịọ ezi ajụjụ na m mgbe ụfọdụ iche banyere ya mgbe m na-ahụ ya. M n'ezie na-agaghị na-agụ isiokwu n'ihi na m bụ nnọọ ike gwụrụ nke ndị bashing. ezi echiche.
Menna • January 30, 2014 na 8:06 pm • zaghachi
Ị bụ nke mere ụdị ad obi-hearted! -N'anya Chineke ọtọde na nke a blog. -Agọzi gị ịkwada!
ashanae • January 30, 2014 na 10:00 pm • zaghachi
M ga-asị nile nke na ajụjụ ndị ha dị ukwuu na nke wezụga nke ọnụ ọgụgụ 5( M na-ahụ ebe ị na-abịa site ezie na, ma Jay-z abụghị oyi ma defintely bụghị ngwa nju oyi karịa onye bi n'ihi na Jehova.). O yiri ka ọ bụ ezie na ị na defintely elekọta n'aka banyere nwaanyị ahụ. Achọghị m ka m na-awụlikwa elu ka ọ bụla nchikota, dika agāsi na unu agaraghị-akọrọ ndị Gospel na ya mgbe eweta ndị 4 chere akpali iche ajụjụ mbụ. Otú ọ dị, M na-ekweta ihe a ibe commenter(JONREAGAN) on a blog. The Gospel bụ nanị obi / uche-changer. Ọ ga-abụ oké ma ọ bụrụ na ọ nụrụ na ọ site n'aka onye(dị ka gị) onye na-ekerekwa òkè music(ọ bụ ezie na ị ma bụ na dịgasị iche iche) mara-omimi nke ọ bụ mmetụta. Ekele Njem gị ịdị njikere ijere Onyenwe anyị, ọ na-agba ume na onye dị ka m bụ onye bụ nnọọ ihere mgbe a bịara n'ịghọ mmekọrịta na ndị mmadụ na-ekere òkè Oziọma. Chineke na-agọzi gị na ezinụlọ gị!
ashanae • January 30, 2014 na 10:21 pm • zaghachi
Ndo, Echefuru m tinye ajụjụ na m ga-achọ ka ị na-ajụ. Ọ ga-abụ oké ma ọ bụrụ na i nwere ike ịjụ ya: Olee ụdị music / lyrics nke i chere na nne na nna ga na-echebe ụmụ ha si?
MichelleJ • January 31, 2014 na 12:57 Abụ • zaghachi
Nke ahụ bụ ezigbo ụzọ iji nweta na-akparịta ụka Rolling. M onwe-akwado nke ya onwe m, ma m na-ahụ ya nnọọ ike na vocally bi, -ezi na-akwalite àgwà Chineke, mgbe (nzuzo) jamming ya tracks. Ọ na-a na-alụ maka nkeji, karịsịa ebe ọ bụ na m na a ibe Houstonian NA ihe alumna si ya ọkwa ụlọ akwụkwọ. M na-gbara gburugburu, M na-agwa ya!
Grace na udo fam!
Ashanae • February 1, 2014 na 12:03 Abụ • zaghachi
Hi MichelleJ, ọ bụ nnọọ ezi ahụ ike n'ụzọ ime mmụọ maara ihe na ị na-eche convinction ná ndụ gị mgbe ọ na-abịakwute atuaha. M agba gị ume ikpe ekpere feverently na Jehova na-ewepụ ọchịchọ ahụ ige ya ntị music nke bụ doro anya na mgbochi Christ n'ọtụtụ ụzọ, dịkwa mma Achọghị m ka m na-sugarcoat ya, ọtụtụ n'ime ya music bụ Setan ma ọ bụ mara mma. Ama m na m na ọ bụghị na-agwa gị ihe ọ bụla na ị na-amaghị ama banyere ya music ịbụ mgbochi Christ, ma, biko na-anụ m. Ọzọkwa, esi mee ka mmadụ(a kwere ekwe ibe n'ezie) onye ị pụrụ ịtụkwasị obi na-egbochi unu aza ajụjụ ma kọwaa / ekwupụta gị ọgụ ya ma ọ bụ ya. Anyị niile nwere egwu na n'ọgụ a Jehova mere nye ayi amara ya iji merie anyị siiri.
P.S. Ọ bụghị yie ndị ziri ezi ị na-ege ntị ya music ma ọ bụ echiche nke ị ghara purposely-eme ka ihere ka Jehova, gherekwa ige ntị na ya n'ihu ndị na-achọ ka ị dị ka ihe nlereanya Kraịst. Ka Jehova na na na.
Libb • February 1, 2014 na 3:41 pm • zaghachi
M hoo haa nwere ajụjụ ndị yiri. Ọtụtụ n'ime ndị enyi m na anya aka Beyonce nke na-echegbu m otutu n'ezie. Ọ bụ mwute na ịbụ sexy bụ ihe ha na-adọgburu dị ka a n'ihi ya mmetụta. Ọ na-nwekwara e etinye on a elu, otú n'ihi na ụfọdụ ndị na ọ bụ dị ka ọ bụ otú nkà, ọ pụrụ ime ihe ọjọọ ọ bụla… ha adịghị eche oké banyere ihe ọ na-ekwu ma na-eme na otú na-emetụta ha… ozugbo ha nụrụ Beyonce ọ bụ ihe niile mma, n'agbanyeghị nke ozi, nke dị mwute. Ya mere, ee, Dị m obi ụtọ na Njem na-arịọ ajụjụ ndị a – ọ bụ ụmụ mmadụ ka ndị fọdụrụ n'ime anyị na kwesịrị ịtụgharị uche n'ihe ọ na-eme na onye ọ na-akpali ihe dị ka President nke United States… ọ bụ na usoro mgbasa ozi dị nnọọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ndị ọzọ.
Natalie • February 1, 2014 na 5:06 pm • zaghachi
hey ịkwada ị maara #5 na bụ ndị stof nri e haaa!!!
ọma m nwere ikwu na ị na-ehota Illuminati dị ukwuu dị ka ọ na-eweta ọjọọ pịa ya n'ezie, ọ bụ n'ebe ị naanị na-ekiri dmx na-agba akaebe na Kraist na ihe Illuminati mere ya mara nke a.
M aint si j-z definately nwere ndisịn idem ma rihanna na ya ghara ịghọ aghụghọ ule na-adịghị eme ka aka ya nile a bit na ihe ndabakọ..
a hụrụ m Beyonce ya Abasi ọnọ talent.. ya na nkpuru nke mmụọ ya..
na dị ka m n'anya mmanya na-egbu na ịhụnanya ( dị ka a onye song si ya ka ya na a ga-nkịtị naanị n'ihi na ha na ọ bụghị anyị wee hụ ) m na-eche na ọ bụ nrụgide, i n'ezie ime eche dum rihanna ihe dented okwukwe ya, ya onwe kweere, na ya onwe n'anya na anyị niile ga-enwe ụfọdụ n'ime..
ya kwes ir ekpere anyị!! -ekele gị maka na ha achọghị ọgụ ya na ajụjụ gị, M na-ekele mmụọ nsọ maka ịsa ị na amamihe kama ikpe.. ọ ekwu na Bible na anyị ga-ekpe ikpe.. ma na ọtụtụ Ndị Kraịst nwere a ka ha chefuo nsogbu. ndị ikwu m ndị dị ka nke a.. tinyere mụ onwe m.. na ị bụ onye nlereanya Kraịst! chukwu gozie gị na gị music, gị ozi site na music na chi gọzie Beyonce n'ihi na ọ ga-abịa n'azụ na ekpere bụ ike karịrị mmụọ ọjọọ uwe mgbokwasị nke mmehie!
Jacob • February 1, 2014 na 10:10 pm • zaghachi
-Akpali ma jụụ!
akwụkwọ • February 3, 2014 na 7:05 Abụ • zaghachi
Ya mere dị mma nke YU bụghị ikpe ya ma ọ bụ gbawara ya n #5 M knw yu're ụzọ ngwa nju oyi karịa Jay-z….
Demarcus • February 5, 2014 na 7:47 Abụ • zaghachi
M hụrụ n'anya na m na na na na banyere nke a otu? Ma ha ma nke unu bụrụ, sị na chọọchị ma ọ bụ na-egwuri nnukwu ọrụ na chọọchị? Echere m na ị ga-eme ya. M na-ekpe ekpere ka unu.
Kay • February 5, 2014 na 8:31 Abụ • zaghachi
Daalụ maka ịjụ ajụjụ na ọtụtụ n'ime anyị ga-achọ ịjụ. Ebe ọ bụ na i nwere n'elu ikpo okwu na-eme otú, anyị nile nwere ekele maka ị. Chineke dị mma, na n'ihi na i were oge nke gị ọrụ n'aka na-ajụ ndị a na ụdị ajụjụ a nnọọ ọkachamara n'ụzọ, Ọ ga-akwụ gị ụgwọ n'ihu ọha. Dị ka ị kwuru, sị, i nwere onye mmehie, dị ka anyị nile na-, ma ọ bụrụ na ị nabatara Jesus dị gị Nzọpụta, ị, sir, na-now onye mmehie Zọpụtara site Grace. Amen!
Aric • February 6, 2014 na 9:30 Abụ • zaghachi
Echere m na ọ na-aghọ kemgwucha ọjọọ mmetụta n'oge na-adịbeghị, onye ọ bụla na-aga ọkara gba ọtọ na ogbo kwesịrị echegharị echiche na ihe ha na-eme n'ọnọdụ ahụ. M nnọọ iwe na anyị mbụ Lady n'ihi na ya akwadoghi ọzọ approiate egwú. Obama bụ otu ihe ahụ na-akwado seculier RAP artist na-akwalite ime ihe ike mgbe ọ ga-eji megide na!
Mwende • February 7, 2014 na 1:15 Abụ • zaghachi
Abụ n'ezie greatful maka ihe unu gosikwa ajụjụ( Ọ dịghị onye na a ịkatọ ụzọ) na bụ egwu. ugbu a, E kere anyị ka ịdị Chineke arịa ofufe site n'ibi ndụ nke ofufe (ekpere, -agụ na ịtụgharị okwu Chineke, ịgba àmà na ịkụziri ndị ọzọ banyere ịhụnanya Chineke na maka ha. Ya mere, na-ahapụ ikpe ekpere maka ndị nọ anyị gburugburu, ka ha wee hụ site n'anya Chineke ma ghara ime ihe kwekọrọ na n'ụzọ nke ụwa dị ka anyị si agba akaebe nke Chineke na-arụ ọrụ.
ndidi • February 12, 2014 na 12:13 pm • zaghachi
Nza nke ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ bulie on m na m maara na Beyonce nwere ike ịgbanwe na otú ahụ ka m chọrọ ya na-a ezigbo enyi m ndị a ma bịakwute m akwụkwọ na-agwa ndị mmadụ na m na ya bụ enyi
Jess • February 12, 2014 na 2:03 pm • zaghachi
Ọbụna Jesus biri na mmehie.
Anyị na-akpọ na-eje ije ịhụnanya na-enyere mmadụ nile aka Christ.
Charity • February 13, 2014 na 12:23 pm • zaghachi
Mmadụ anọ ahụ (ajụjụ 5 adịghị gafere m n'uche mgbe nile, Echere m na ị na-ngwa nju oyi) ajụjụ N'igbu ya ná nkenke niile 100 nke onye m nwere maka Beyonce.
-eweta • March 2, 2014 na 2:57 Abụ • zaghachi
Dị nnọọ thinkin n'obi u si yall na-ma mmehie achọ Gods amara. Ọ n'aka na-eme ka o nwere na zuru okè. Ọ na ọtụtụ ndị na-ekiri n a mfe mkpụrụ obi nye elu. Ọ ga na-ọzọ na ndụ a kpatara nke a bụ ya Eluigwe. Ekwensu bụ ebe a ma kwere ya ma ọ bụ WTF otú o na-arụ ọrụ. Ọ bụghị nzuzu dị nnọọ akpata ọ bụ satin, ma ọ bụghị ya nke eluigwe na-apụghị inye u ọzọ ma ọ bụ n'anya u ihe karịrị Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile. ekele
ga- • March 11, 2014 na 4:01 pm • zaghachi
M hụrụ n'anya nke a post! Ndị a bụ ụfọdụ oké ajụjụ. Artists na-echefu banyere mmetụta ha nwere on eto eto na-, ma ọ bụ ndị mmadụ n'ozuzu, na adịghị aghọta ego nke mgbali na mgbagwoju anya na ike ga-ike mere ka.
Biko-anọgide na-ekwe ka Chineke na-eji gị na ịrụzu ọrụ o malitere na ị. Luv.
P.S. Daalụ maka ịza ajụjụ ahụ banyere ihe mere ị lụọ a na-acha ọcha girl…akpa ọchị!
Tiffanie • April 3, 2014 na 9:55 Abụ • zaghachi
Awesome isiokwu. Daalụ maka-erube isi na-ekere òkè. -Agọzi gị na ezinụlọ gị.
Ashley D. • July 14, 2014 na 10:29 pm • zaghachi
nke ọma na-etinye!
Julia ụlọ akwụkwọ ji agwụ • October 14, 2014 na 10:08 Abụ • zaghachi
Waaaaaaayyyyyy ngwa nju oyi karịa JayZ. Waaaaaaaaaaayyyyyyyy.
aha: Jesus Christ Alaeze Ukwu | Pastor-rapper Njem Lee Mkparita Na-akpọ Youth na-'Bilie’ na-eje Ozi na Fans on a Personal Ọkwa (video)
aha: Pastor-Rapper Trip Lee Talks Calling Youth to 'Rise' na-eje Ozi na Fans on a Personal Ọkwa (video) - Social News Dashboard
Gosiputa Mmekọ Mmekọ • July 29, 2019 na 2:18 pm • zaghachi
Isiokwu dị mma nke ukwuu. Ahụrụ m nke a n'anya
webụsaịtị. Jide ka iji!